Umaki: upsnap | Martech Zone
I-UpSnap: Ukukhangisa okungabizi okungamaselula, okwasendaweni, nokwendawo
NgoMsombuluko, Agasti 3, 2015 NgoMsombuluko, Okthoba 12, 2015 Douglas Karr
I-UpSnap inikeza inethiwekhi yokukhangisa yeselula enikela ngokuvela okungaphezu kwezigidi eziyinkulungwane ngenyanga. Futhi ngokubambisana kwabo namanye amasayithi amakhulu, bayakwazi ukubonisa izikhangiso kumanethiwekhi avela eceleni ngezinga elingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyikhulu ezivelayo ngenyanga. I-UpSnap ikuvumela ukuthi ukhombe amakhasimende aseduze kwebhizinisi lakho. Lapho umkhankaso wakho usuqala ukusebenza, i-UpSnap izobonisa isikhangiso sakho seselula kumakhasimende angaphakathi kwebanga eliyimayela amahlanu. Ukuqondiswa kunwebeka ngaphandle kususelwa ngaphandle